Mba tsy hiovaova amin’ny fiovaovan’ny toetrandro | NewsMada
Mba tsy hiovaova amin’ny fiovaovan’ny toetrandro
Par Taratra sur 04/11/2021
Hanao ahoana ny ho vokatry ny fivoriana iraisam-pirenena momba ny fiatrehana ny ady amin’ny fiovaovan’ny toetrandro? Ho hita eo… Tsy vao izao no nisy fikaonandoha toy izany; eny, na ny fehinkevitra tsara rindra amin’izany aza. Ny ataon’ny sasany ihany no ataony? Indrindra ny amin’ireo firenen-dehibe. Hatramin’izao, amin’ny ankapobeny, mihapotika fa tsy mihatsara aloha ny tontolo iainana.
Efa voka-javatra tamin’izay nataon’ny zanak’olombelona izay ela izay ny fahapotehan’ny tontolo ianana: tsy mitsinjo ny farany, tsy mihevitra ny hafa. Nefa tsy misy afa-bela amin’ny fahapotehana amin’izao. Samy tratran’ny dona sy mitondra faisana avokoa amin’izao. Tsy vahaolana fa famonoan-tena aza ny fiolonolonana na ny fiheverana ho mahavita tena, ny fanilihana ny hafa ho tsy ilaina…
Lasa toy ny tanàna kely izao tontolo izao, ankehitriny? Noho ny hoe fanatontoloana amin’ny fisiana sy fampiasana haitao avo lenta, indrindra eo amin’ny sehatry ny serasera. Mihazakazaka izao tontolo izao. Ho aiza? Tsy eo amin’izay heverina sy lazaina ho fandrosoana ihany izany fa eo amin’ny fihemorana na famotehana koa. Misy lafiny maha ratsy azy ihany izay atao rehetra?
Fampandrosoana famotehana ny tontolo iainana no nisy sy natao izay ela izay: fitrandrahana tsy araka ny lalàna voajanahary, fitrandrahana tafahoatra tsy nijerena lavitra na ny hafa. Fitiavan-tena? Nefa samy potika… Amin’izao fiatrehana ny fahavoazana noho ny fiovaovan’ny toetrandro izao, mbola misy alaim-panahy amin’ny fitiavan-tena? Indrindra ireo firenen-dehibe mihevi-tena ho tsy mba diso…
Hotanterahina manontolo sy amin’ny antsipiriany ve ny fehinkevitra amin’izao fivoriana iraisam-pirenena izao? Tsy fombafomba na mahazatra fa hifanara-maso ny rehetra, hifampahatsiahy sy hifampiteny aza raha ilaina. Hisy ny fahasahiana sy fijoroana ary fahavononana amin’izany? Mba tsy hiovaova amin’ny fiovaovan’ny toetrandro! Izay koa no anisan’ny manapotika amin’izay atao…